Thursday May 23, 2019 - 19:03:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xukuumadda Aala Sacuud ayaa sare uqaadday ololaha ay ku beegsanayso siyaasiyiinta iyo culimaa'udiinka mucaaradsan maamulkeeda.
Warar si aad ah ay ufaafisay warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegaya in Nidaamka Maxamed Bin Salmaan uu qorshaynayo in uu xukunno daldalaad ah ku fuliyo illaa sedax nin oo dhammaantood arrimo siyaasadeed ugu xiran xabsiyo ammaankooda si aad ah loo adkeeyo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda Sacuudiga ay daldalaad uqorshaynayso bisha Ramadaan kadib ragga kala ah Sheekh Salmaan Alcowdah, Sheekh Dr Cawad Alqarni iyo Dr Cali Al cumari oo dhammaantood kamid ahaa wadaadada caanka ka ah dhulka xarameynka.
Shabakadda Middle East Eye ee laga leeyahay dalka Ingiriiska oo soo xiganaysa ilo wareedyo mas'uul ah ayaa sheegtay in dowladda sacuudiga ay xukunadda dilalka ah fulin doonto marka ay dhammaato bisha barakeysan bisha ramadaan iyadoo raggan culimada ah ku eedaynaysa in ay faafinayeen wax ay ugu yeerta fikir xagjirnimo.
Kumanaan kun oo culimaa'udiin xaqqa lajahra ah iyo aqoonyahanno mucaaraday siyaasadda gaalnimada ah ee Maxamed Bin salmaan ayaa ku jilba xiran xabsiyada aala sacuud iyadoona boqolaal culimo ah ladilay halka kuwa kale ay dil sugayaal yihiin